Tababare Diri dhabe’ farxad Gaara bay ii tahay in Aniga vs Saaxiibkey Tababare Shakuur u soo wada gudubno wareega 2aad…… | Salaan Media
Tababare Diri dhabe’ farxad Gaara bay ii tahay in Aniga vs Saaxiibkey Tababare Shakuur u soo wada gudubno wareega 2aad……
Tababare Diri dhabe’ farxad Gaara bay ii tahay in Aniga vs Saaxiibkey Tababare Shakuur u soo wada gudubno wareega 2aad………….
Macalinka Xulka Kubada Cagta Gobolka Maroodijeex ( Hargeysa) Maxamed Maxamuud ( Diridhabe) ayaa sheegay inuu aad ugu Faraxsan yahay isaga iyo Saaxiibkii Shakuur Maxamed Ismaaciil oo ay isla qaadeen 1984tii koobkii Gobolada Soomaaliya ay Maanta iyagoo kala wata 2 gobol ay isagu yimaadaan Wareega 2 ee Ciyaaraha Gobolada Soomaaliland ee ka soconaya Garoonka Hargeysa Stadium.
Tababare Diri dhabe waxa uu sheegay in Shakuur uu ahaa Ciyaaryahankii u dhaliyay ex Gobolkii waqooyi Galbeed goolkii dahabiga ahaa ee ay ku hanteen koobkii ciyaaraha gobolada Soomaaliya 1984kii Xiligaasii ay ciyaartii finalka ak badiyeen Xulkii Gobolka Jubada Hoose isagoo ku tilmamaay Shakuur oo lambarka 7 uga ciyaarayay Xiligaasi Waqooyi Galbeed laacib aad ugu wanaagsana kubada Cagta kuna Caan ahaa Xaga Gooldhalinta.
‘runtii farxad gaara oo aan la soo kobi karin ayey ii tahay in Saaxiibkeey shakuur aan isla nimaano Wareega 2 anagoo akal wadana Gobolada Maroodijeex vs Daad Madheedh’ ayuu yiri Tababare Dir dhabe oo intaasi ku daray in Xulka uu hogaaminayo ee Maroodijeex’ Hargeysa’ uu sanadkaan ku dadaali doono sidii uu u Difaacan laaha Koobka Horyaalka Gobolada Soomaaliland ee maraya Marxaladiisii 7aad.
xulak Gobolka Maroodijeex waxa u haray 1 kulan waxana uu Ku Hogaaminayaa Guruubkooda A 9 dhibcood oo Nadiif ah ilaa hadana wa axulka kaliya ee aan arkin Guuldaro iska dhaafe barbardhac,waxaana sanadkaan 2013ka uu Tababare Diridhabe la soo shirtagay Ciyaartaoy difaaci karta Koobka Kubada Cagta Markale.
Axmed Maxamed Cabdulle’Uurdoox’